Inkqubo yokuhambisa ubushushu yokususa ipayipi yeRPR
Ukohlulwa njani ngokuSebenza?
Ukukhutshwa kwe-Induction Inkqubo eshushu yokulungiselela umphezulu. Le ntsimi inciphisa imisinga eguqulwa ibe bubushushu xa idibana nezinto zokuqhuba ezinje ngentsimbi. Ubushushu buveliswa phantsi kwengubo, nto leyo ebangela ukutyabeka kukhawuleze. Le ndlela ilungele ukunyanga indawo ethe tyaba okanye egobile kwindawo yokusebenza kwaye ayifuni kuvalelwa.
iindidi Teknoloji tags Inkqubo yokususa ipeyinti, Ukukhutshwa kweMibhobho yokuSusa ukuThintela, Ukususwa koMbhobho wePayipi, Inkqubo yokususa ipayipi, RPR, Ukususwa kwengubo yeRPR, Inkqubo yokususa i-RPR, Ukungeniswa kweRPR, Ukususwa kwepeyinti yeRPR, Ukususwa kombhobho weRPR, Ukususwa kombhobho weRPR, RPR ukususwa umhlwa ukutyabeka Post yokukhangela